Fitaovana - Viproce Industrial CO., LTD
Ny fanatontoloana ny varotra no manova Shina. Maro ireo vokatra tsara dia tsara Shinoa mandeha miampita ny rindrina lehibe sy hanova izao tontolo izao. Soa ihany koa izahay avy aminy. Na izany aza, maro ireo orinasa lehibe sy ny vokatra dia tsy mbola hitanareo any Shina, ny fanatontoloana ny varotra dia ao dingana ary manantena isika afaka manao zavatra ho azy.
Manana ny orinasa manokana, izay fanerena eo amin'ny avo-famokarana farany indrindra ao clutch sy fanjaitra-roller-jaza izy. Ny famokarana sy ny Advanced fitaovana tratra dia afaka antoka ny fotoana fohy-mitarika sy ny kalitao avo. Ary izahay koa dia miara-miasa amin'ny orinasa hafa mba hanatsarana ny vokatra tsipika. Ny vola avo-mahomby ny famokarana sy ny asa fanompoana matihanina afaka hihaona foana ny fepetra.